ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာတချို့ ရေလျံ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာတချို့ ရေလျံ………..
ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာတချို့ ရေလျံ………..
Posted by moenetminn on Aug 8, 2011 in Creative Writing, Environment | 11 comments
7.8.2011 ရက်နေ့ က နေ့ လည်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ တွင်းနေရာ တစ်ချို့ တွင် ဆိုးဝါးစွာရေကြီးခဲ့သည်…………….
ထိုသို့ ခဏခဏရေကြီးမှုများမှာ ရန်ကုန်မြို့ သူမြို့ သားတို့ ရဲ့စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်စွန့် ပစ်မှုများကြောင့်လား……… တာဝန်ရှိသူများရဲ့ ပေါ့ ရော့မှုများကြောင့်လား…………. သို့ တည်းမဟုတ် နှစ်ခုလုံးကြောင်းပဲလား…………..
ရွာသားအပေါင်းတို့ ရော ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြမလဲ………….?????????????
View all posts by moenetminn →
ခုပုံတွေအရဆို သိမ်ဖြူဈေးကားမှတ်တိုင်နားက လမ်းပဲ။ ဟုတ်လား မသိဘူးနော်။ ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ ရေးပြပါလား။ ရန်ကုန်မြို့က အရင်ထဲက ရေကြီးနေတာပဲ။ ကမ်းနားလမ်းဆိုပိုဆိုးသေးတယ်။ အိမ်အောက်ထပ်တွေဆို နေလို့တောင်မရဘူးလေ။
ဟုတ်ပါတယ်……. သိမ်ဖြူလမ်း နဲ့တောင်ညွန့် မြို့ နယ်တွေမှာ တော်တော်ကြီးခဲ့ ပါတယ်……..
မြို့ထဲက အနိမ့်ပိုင်းဆိုတော့ မိုးကြီးရင် ရေမြုပ်ပြီလေ
မိုးရွာတုန်း မြောင်းရေလျှံပြီး(မြောင်းလေးတွေသေးလို့၊ အမှိုက်ပေါလို့) မိုးတိတ်တော့ ရေပြန်ကျသွားရော
အင်း လှည်းတန်းမှာလည်း ရေမကြီးဘူး။ ၃လွှာကိုတော့ ခရု တက်လာတယ်။
မိုး၇ွာပြီဆို ယုဇနပလာဇာရှေ့မှာလည်း ရေမကြီးမှာမပူပါနဲ့
နောက် ပန်းဆိုးတန်းနားမှာလည်း ခေတ်နဲ့ အမှီရေကြီးနေပါကြောင်း ………….
သမိုင်းလမ်းဆုံနဲ့ … ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံမှာလည်း … … ရေမကြီးလျှင် ခေတ်မမှီမှာစိုးလို့ … အပြိုင်ဆိုင်ရေကြီးနေပါကြောင်း… ရေမချိုးရသေးတဲ့လူ …. ဆပ်ပြာလေးတိုက်ပြီး…. ကားလမ်းဖြတ်ကူးလျှင်ဖြင့် … ရေလောင်းစရာမလိုအောင် ဘေးက ကားများက ကူညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်း … သွားနှုတ်ချင်တဲ့လူများ … .ရေလျှံနေသော ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ချော်လဲခြင်း ၊ ပြုတ်ကျခြင်းဖြင့် စရိတ်သက်သာစွာ သွားနှုတ်လို့ ရနေပါကြောင်း …. သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ် ဗျို့ … ။
အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် မထွက်တော့ ဘယ်နား ရေကြီးနေမှန်းတောင် မသိဘူး ရွာသူ ရွာသားတွေ နေရာတွေ ပြောမှ မိုးရွာရင်နောက် အဲဒီ နေရာတွေ ရှောင်သွားလို့ ရတာပေါ့။ သိုင်းကျူး…
ရေနားစရာတွေက မရှိတော့ဘူးလေ။ အမှိုက်ပိတ်တာပါသလို ရေခဏနားစရာ နေရာ ပျောက်တာလည်း ပါမည် ထင်ပါကြောင်း။
အပေါ်ကပုံတွေ အကုန်လုံးကသိမ်ဖြူဈေးမှတ်တိုင်ရှေ့ က..